सहिद छोराको नाममा छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना « Postpati – News For All
कोरोना भाइरस दाङ प्रधानमन्त्री ओली पक्राउ नेकपा रोल्पा प्रचण्ड राशिफल नेपाली कांग्रेस विप्लव नेकपा
यसरी मनाइयो टुँडिखेलमा घोडेजात्रा (फोटोफिचर)
केपी ओलीलाई तीनपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटायौं, चौंथोपटक चाँडै हटाउँछौ: प्रचण्ड
शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा
बिप्लबको गाउँमा राजनैतिक प्रशिक्षण
सहिद छोराको नाममा छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना
फाल्गुन १४, रुकुम । बाँफीकोट गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष धनबहादुर खत्रीले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका १५ बर्षीय छोरा खड्क केसीको स्मृतिमा अक्षय कोष स्थापना गरेका छन् । छोराले ५ कक्षा सम्म पढेको जनकल्याण माध्यामिक विद्यालयमा १ लाख ११ हजार १ सय ११ रकम सहिद खड्क स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन् ।
विद्यालयको ५५ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा अध्यक्ष खत्रीले अक्षयकोषमा रकम जम्मा गरेको भौचर र चेक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त रकमको व्याज स्वरुप आउने रकमबाट हरेक बर्ष सोही विद्यालयका गरीब तथा जेहेन्दार छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
विद्यालय पोशाक, कापिकलमको अभावमा विद्यार्थीहरुले पढ्नबाट बञ्चित नहोउन भनेर सहिद छोराको नाममा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरेको खत्रीले बताए । उनका अनुसार छात्रवृत्ति अर्को बर्षदेखि प्रदान गरिने छ । अर्को बर्षदेखि हरेक फागुन १२ गते विद्यालयको बार्षिकोत्सवको अवसरमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नाम घोषणा गरिने छ भने फागुन १५ गते छात्रवृति प्रदान गरिने छ ।
खत्रीका जेठा छोरा खड्क २०५२ फागुन १५ गते प्रहरीद्धारा मारिएका थिए । तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेको १४ औं दिनपछि साविक पिपल गाविसको मेलगैरीमा अन्य ५ जना खत्रीबन्धु संगै खड्क मारिएका थिए ।
सहिद हुँदा उनी रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–३, स्थित जनता माध्यामिक विद्यालयको कक्षा ६ मा अध्ययनरत थिए ।
१४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार को दिन प्रकाशित
ओली र देउवाको एउटै दाउ
आज घोडेजात्रा, घोडा किन्ने श्री ३ कै !
रोल्पामा विप्लब नेकपाले बढायो राजनैतिक गतिबिधि
भारत गएका सल्यान डाँगीगाउँका याम बहादुर बेखर
इन्द्रेणीलाई पछ्याएको रुकुम पश्चिमको भिडमा प्रचण्डको राजनैतिक गोल !
माडी गाउँपालिकामा विप्लव नेकपाको प्रशिक्षण तथा बैठक सम्पन्न
प्रचण्ड र जनार्दनलाई पच्छ्याएको रूकुम पश्चिमको भिड (फोटोफिचर)